Ny firenena amin'ny fiposahan'ny masoandro dia malaza amin'ny mpizaha tany. Ao Japana dia manintona ny zava-drehetra: avy amin'ny Tendrombohitra Fuji goavana mankany amin'ny famokarana kiriodra mamony. Olona an-tapitrisany no tonga eto isan-taona mba hiaraka amin'ny lova ara-kolontsain'ny fanjakana fahiny. Ry orinasan-dalamby any Japon, manana fahafahana hitarika ho anao fitsangatsanganana amin'ny fahasamihafana amin'ny teny Rosiana, betsaka.
Fialan-tsasatra manerana an'i Japana dia ny fizaran-taona sy ny taona. Ny voalohany dia fitrandrahana fohy amin'ny vanim-potoana manokana: felam-boninkazo, fety nasionaly , fety, maples autumn, fipoahan'ny volkano , mitaingina tendrombohitra amin'ny vanim-potoana iray. Aza mamolavola raha tsara kokoa ny mandeha any Japana, satria misy fitsangantsanganana maro amin'ny lohahevitra samihafa sy ny endrika hafa.
Amin'izao fotoana izao dia nanjary nalaza ny fividianana valiny tsy misy fandefasana ny fitsangatsanganana manokana manerana an'i Japana: ny safidiny dia natao teo. Raha vao sambany vao mitsidika ny firenena dia mbola manolo-kevitra ny hividy fitsangatsanganana vonjimaika amin'ny fahitana ny fahitana ny firenena. Raha mitsidika voalohany an'i Japana ianao, raha tianao, dia afaka manangona fitsangatsanganana manokana ianao.
Tokony ho raisina an-tsarobidy ny tombon-tsain'ny Japoney ho an'i Rosia sy ireo firenena avy any URSS teo aloha, noho izany, any Japon, ny fitsidihana amin'ny mpitarika miteny Rosiana dia tsy mahazatra. Ny baiko rehetra dia mety ho vondrona na olona iray ary novonoina na tamin'ny fitateram-bahoaka niaraka tamin'ny famindrana, ary tamin'ny fiara manokana, nohofana .
Fialamboly malaza any Japon
Ny fitsidihana an-dalamby an'i Tokyo , renivohitr'i Japana, dia tarihina amin'ny làlana maromaro, ohatra:
Mitsidika ireo tanàna malaza indrindra ao an-tanàna - ny lapan'ny mpanjaka, Shinjuku, ny tempolin'i Shinto indrindra ao Tokyo - Meiji Dzingu, misy toeram-pokonolona sy ala fahiny, ny foiben'ny fividianan'i Ginza sy toerana hafa mahaliana;
Ny fitetezam-paritra " Tokyo mahagaga " dia midika ho fanaraha-maso ireo toetran'ny renivohitra japoney izay miala amin'ny sinema, anime ary boky, ary araka izay ambaran'ny vahiny an'i Japana: ny araben'i Shibuya, ny distrikan'i Asakusa, Haradziuk ary ny hafa.
Ny fitsangatsanganana "Fuji-san" dia midika hoe mitsidika ny karatra fahitalavitra Japoney - Mount Fuji. Asehoy ny toeram-pivavahana Shintoista fahiny tao Sengezhindya, tanàna Japoney ary farihy iray eo am-pototry ny tendrombohitra. Amin'ny toetr'andro tsara, afaka mandeha amin'ny fiara ho any amin'ny 2300 m ambonin'ny tany ianao. Ny fiakarana an-tampony dia tokony ho 6 ora ary mety amin'ny fe-potoana hatramin'ny Jolay ka hatramin'ny Septambra.
Ny fitsidihan'i Kyoto , renivohitr'i Japana fahiny, dia miditra ao anatin'ny tontolo antitra. Hitsidika ny tranokalan'i Nijo ianao, ny tempolin'i Boddao ao Ryongji sy ny fitoerana masin'i Kiyomitsu-deru, dia mahafantatra tsara ny geisha ao amin'ny faritra Gion ary maro hafa.
Tsidiho ny Odaibo , nosy artificielle ao amin'ny Bay ofisialin'i Tokyo. Eto ianao dia hitsidika ny tranom-bakoky ny ho avy "Miraikan" ary hijery ny endrik'ilay robot Asimo, ny Statue of Liberty ary ny robot Gandama. Hahazo ny fahafahana handeha hiakatra amin'ny sehatra fiambenana Fuji TV ianao, hankafizo ny fomba fijerin'ny Tokyo Bay ary hahita ny Bridge Bridge .
Park misy voninkazo Ashikaga - toeram-pambolena ahitra ho an'ny mponin'ny metropole. Ity dia iray amin'ireo valan-javaboary lehibe indrindra ao amin'ny firenena, izay fantatra manerana izao tontolo izao noho ny fanangonana kisarisia. Tena tsara tarehy ny zaridaina ao amin'ny "Rainbow Month" - nanomboka tamin'ny tapaky ny volana May ka hatramin'ny fiandohan'ny volana Jona: tamin'io fotoana io dia nisy karazana raozy sy petunias an'arivony maro naniry tao Ashikaga.
Ny fitsangatsanganana "rano fanasitranana ao Hakone" dia midika hoe mitsidika ny Valanjavam-pirenena lehibe indrindra any Japan sy ny toeran'ny loharano mafana manakaiky an'i Tokyo. Azonao atao ny mikambana avy hatrany any anaty batisan-tany mafana. Ary hampitombo ny fahatsapana ireo tranombakoka sy tranomboky eo an-toerana.
Iray amin'ireo tadiavin'ny Eoropeanina any Japan ny orinasa Toyota . Ao anatin'ny sehatry ny famerenana dia hitsidika ny efitrano fampirantiana, ny efitrano fivoriambe ary ny tranom-bakoky ny mpanamboatra fiara malaza.
Ny mpankafy ny kolontsaina Japoney dia afaka mandamina fitsangatsanganana ho an'ny fifaninanana sumo na ho an'ny sekoly mpitsara kilasy Kodokan , mitsidika ny tsena trondro Tsukiji ary mahazo kilasy maoderina amin'ny fanaovana sushi any, na mba hahafantaranao ny tanànan'ny ninja - Iga-Ueno. Ny fifantenana ny fitsangatsanganana any Japana dia goavana tokoa!
Ny fandaharam-potoana hialana amin'ny fialan-tsasatra any Japana, tsy maintsy dinihina ny vidin'ny vidin'ny fitsangatsanganana an-toerana, noho ny fari-piainan'ny mponina ao an-toerana. Ny fialantsasatra farany dia 6-12 ora.
Fivarotana any Antalya
Ny labozia miaraka amin'ny propolis amin'ny gynecology
Sarin'ny zazavavy ho an'ny sary fitifirana
Ambasadin'i Luxembourg any Okraina
Trondro ao amin'ny mikraoba - fomba tsotra sy haingana ho an'ny isan'andro
Boky mahasoa ho an'ny fampandrosoana
Kashi Nestle - varotra
Ny jirom-behivavy dia lohataona
Afaho amin'ny paprika